ब्रान्ड पर्सेप्शन सफल मार्केटिंगको लागि महत्वपूर्ण हो Martech Zone
ब्रान्ड पर्सेप्शन सफल मार्केटिंगको लागि महत्वपूर्ण हो
शुक्रबार, जनवरी 1, 2021 शनिबार, जनवरी 2, 2021 Douglas Karr
जब मैले मेरो बुबाआमासँग शिकागो वर्षौं पहिले भ्रमण गरें, हामीले सेयर टावर (अहिलेको रूपमा चिनिन्छ) को अनिवार्य भ्रमण गर्‍यौं विलिस टवर)। भवनमा ब्लकहरू हिड्दै र हेर्दै - तपाईं सोच्न थाल्नुहुन्छ कि यो कस्तो अभियांत्रिकीको इन्जिनियरिंग हो। यो 4.56 मिलियन कूल स्क्वायर फीट, ११० कथा अग्लो, निर्माण गर्न years बर्ष लाग्यो र आठ-लेन, पाँच-माईल-लामो राजमार्ग बनाउन पर्याप्त क concrete्क्रीट प्रयोग गरियो।
त्यसोभए तपाईं लिफ्टमा चढ्नुहुन्छ र १०103 फ्लोर माथि जानुहुन्छ स्काइडेक। त्यस बिन्दुमा, भूमिबाट १ 1453 फिट माथि, तपाईं भवन बिर्सनुभयो। शिकागो, मिशिगन तालिकालाई हेरेर, र क्षितिजले तपाईंलाई उडायो। धारणा पूर्ण रूपमा भवनको आधारबाट यसको माथि जान्छ।
धारणाको साथ समस्या छ ... यसले हामीलाई गलत मार्गतिर डो .्याउँछ। यदि तपाईं जहिले पनि विलिस टावरको मुनि पट्टि उभिनुभयो भने, तपाईंले कहिल्यै नसक्ने अविश्वसनीय शहरको सराहना गर्नुहुने छैन। हामी यो बजारको रूपमा गर्छौं। हामी हाम्रो कम्पनी वा यसको उत्पादन वा सेवाहरू हाम्रो ग्राहकहरूको जीवनको केन्द्रको रूपमा राख्छौं। हामीलाई लाग्छ कि हामी संसारको सब भन्दा ठूलो भवन हो। हामी ठूला हुनसक्छौं, तर शहरका लागि - तपाईं हजारौं भवनहरू मध्ये एउटा हुनुहुन्छ।
कहिलेकाँही हाम्रो ग्राहकहरु हामीलाई निजी, ग्राहकमा आधारित सामाजिक नेटवर्क को विकास को बारे मा सोध्छन्। तिनीहरू विचलित हुन्छन् जब हामी उनीहरूलाई भन्छौं कि तिनीहरू त्यति महत्त्वपूर्ण छैनन्। तिनीहरुका हजारौं ग्राहकहरु उनीहरुको टाउट छन्, उद्योगमा उभिएर, विशेषज्ञहरु संग उनीहरुका स्टाफमा छन्, फोन कलहरु तिनीहरु पाउँछन्, हिटको संख्या उनीहरूको वेबसाइटमा, याडा, याडा, याडा। तिनीहरूले नेटवर्क सुरू गर्छन् ... कसैलाई वास्ता छैन। कोही आउँदैन। अब यो अहंकारमा लागीरहेको छ र तिनीहरू लज्जित छन् ... त्यसैले तिनीहरूले ग्राहकहरूलाई नेटवर्कलाई समर्थनको लागि प्रयोग गर्न, उनीहरूमा स्वचालित रूपमा लगइन गर्न, र प्रबन्धकहरूलाई जिम्मेवार ब्यबहार गर्छन् जस्ता नेटवर्क बढ्दै गएकोमा बढाइबढाइ भन्न लगाउँदछन्। सास
यदि उनीहरूले ग्राहकहरूको धारणा बुझ्दछन् भने, तिनीहरू त्यो सडकमा कहिल्यै पुगेनन्। तिनीहरूलाई थाहा छ कि ती ग्राहकहरूको समग्र कार्यदिवसको एक सानो अंश हुन्। सायद उनीहरू हप्तामा एक पटक १ 15 मिनेटको स्लटमा फिट हुनेछ जुन ग्राहकले उनीहरूको उत्पादन प्रयोग गर्नका लागि छुट्याएको छ। यदि उनीहरूले आफ्नो ग्राहकको धारणा बुझ्दछन् भने, उनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूको आवश्यकता वा चाहँदैनन् भन्ने कुरामा लगानी गर्नु भन्दा उनीहरूको ग्राहकको आवश्यकताहरूको लागि फुर्तिलो र उत्तरदायी रहन जोड दिन्छन्। एक सामाजिक नेटवर्क को विकास को सट्टा, सायद तिनीहरूले एक सुधारिएको सम्पादक, एक FAQ खण्ड विकसित भएको हुन सक्छ, वा कसरी आफ्नो उपकरणको राम्रो उपयोग गर्न को लागी अतिरिक्त भिडियो राख्नु पर्छ।
धारणा केवल तपाइँको ग्राहकहरु सुन्न को लागी हैन, यो तिनीहरूको दृष्टिकोण बाट तपाइँको व्यवसाय को समझ को बारे मा छ:
कसरी, कहिले र किन उनीहरू तपाईंलाई प्रयोग गर्छन् बुझ्नुहोस्।
बुझ्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईंको बारेमा के मनपर्दछन् र केमा उनीहरू निराश हुन्छन्।
बुझ्नुहोस् के तपाईंको जीवनमा तपाईको साथ काम गर्न सजिलो बनाउँदछ।
बुझ्नुहोस् कसरी तपाईं तिनीहरूलाई अधिक मूल्य प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाइँले यो पत्ता लगाउनुहुन्छ, तपाइँको मार्केटि thatमा त्यस दृष्टिकोण प्रयोग गर्नुहोस्। सायद तपाईले भर्खरको रिलिजमा थप्नु भएको 438 15 features सुविधाहरू सूचीबद्ध नगरी राम्रो हुन सक्नुहुनेछ - र यसको सट्टामा तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँका ग्राहकहरू अझ महत्त्वपूर्ण काममा व्यस्त छन् ... तर १ XNUMX मिनेटको लागि तपाइँलाई चाहिन्छ, तपाइँ सँधै त्यहाँ हुनुहुन्छ। ।
टैग: शिकागोग्राहक प्रतिक्रियाग्राहक परिप्रेक्ष्यसुन्दैधारणासमुद्री टावरविलिस टावर
Repurpose हाऊस: अधिक यातायात ड्राइव गर्नुहोस् र यो सेयर गर्न योग्य सामाजिक मिडिया सामग्री सेवाको साथ नेतृत्व गर्नुहोस्
वेबका प्रकारहरू के हुन्छन् (गाढा, गहिरो, सतह, र स्पष्ट)?
मार्स 14, 2013 मा 4: 58 एएम
म तपाईंसँग पूर्ण रूपमा सहमत छु डगलस! जब सम्म तपाइँ तपाइँको ग्राहक र तपाइँको जीवन मा तपाइँको भूमिका के हो थाहा छैन, तपाइँ एक सफल मार्केटिङ अभियान को विकास गर्न सक्नुहुन्न। कठिन बजारमा सफल हुनको लागि तपाईंको कम्पनीको तिनीहरूको धारणा महत्त्वपूर्ण छ।
मार्स 14, 2013 मा 7: 34 एएम
शानदार पोष्ट (सामान्य जस्तो), डग!